Nhau - 2020 Yechipiri Quarter Kushambadzira Musangano · Kurumidza uye Hasha
2020 Yechipiri Quarter Kushambadzira Musangano · Kurumidza uye Hasha
Na8 am musi waChikunguru 5, 2020, musangano wekushambadzira weKaihua Mould we2020 wakaitwa nenguva muhoro yemusangano weTongji Huangyan Rural Revitalization College.
Hwerengedzo yevashandi vekushambadzira makumi matanhatu nevatanhatu nevatungamiriri vakuru kubva kuHuangyan Headquarters neSanmen Factory vakapinda mumusangano uyu wekushambadzira. Musangano uyu wakakamurwa kuita misoro miviri:
①Musangano wechipiri wekota wekushambadzira we2020
4thIye rechina "Kurumidza uye Kushuvira" Chiitiko Chekuwedzera
Nguva dzinoshamisa dzemisangano yekushambadzira
Pakutanga kwemusangano, Sachigaro Liang Zhenghua akapa hurukuro.
Chekutanga pane zvese, Sachigaro Liang Zhenghua akagovana dhata "Mwero wekupedzisa wehurongwa hwechirongwa mukota yechipiri yaive 101%, uye kuita kwacho kwakawedzera ne35% gore-pagore." Sachigaro Liang Zhenghua akasimbisa zvizere mashandiro evashambadziri varipo mukota yapfuura uye akataura kutenda kwake kune wese munhu. Ipapo akabva aongorora zvakadzama mamiriro azvino emusika, akaudza munhu wese nezve tarisiro uye nzira yekushanda yekota inotevera, ndokuisa mazwi mana akakosha: "pfupi kutenderera", "ruzivo rwevatengi", "zvigadzirwa zvitsva", "vatengi" mumwe wako ”.
Tevere, mushandi wega wega wekushambadzira akauya padanho kuzotaura pfupiso yebasa yekota yapfuura uye chirongwa chebasa chekota inotevera.
Gina. chinja, gadzirisa chimiro chavo, uye wedzera, zvisinei neMabatiro aungaita nevatengi kwese kwese! ”
Vatungamiriri vakuru vekambani vakatora danho rimwe nerimwe kugovana zvavanonzwa mukota yechipiri uye negwara rekuvandudza mukota inotevera.
Liu Qingjun, Executive Mutevedzeri weMutungamiri weHuangyan Headquarter
Liang Zhengwei, Executive Mutevedzeri Wemutungamiri weSanmen Fekitori
Kurumidza & Hasha
“Di——” Nemuridzo wemurairidzi, basa rekusvitsa iri rakatanga zviri pamutemo.
Ichi chiitiko chekusvitsa chinonyanya kuve nezvikamu zvina, "Icebreaker", "Dzvinetsa Iwe: Yakakwira-kukwirira Tightrope Kufamba", "Team 150, Power Circle" uye "Happy BBQ".
Ngatinzwei mweya unodziya pachiitiko pamwe chete!
Kubudirira kunouya kubva kuchikwata, uye timu inozvizadzisa.
Mutambo wekupwanya chando zvinobudirira unoputsa zvipingaidzo pakati pevanhu, unogadzira yakanaka yekutaurirana mhepo, uye inomutsa kushingairira uye kurwisa mweya wenhengo dzechikwata.
"Kukwira kumusoro-kwakasimba tambo kufamba"
Kubva pakutanga izere netariro, nhanho kusvika pakati pemeteor, kunonoka kuenda kumberi, pasi pekushevedzera uye kurudziro yevamwe vangu, kuburikidza neyakaomesesa danho, kuziva mamiriro ari kure, kutora tsoka yakasimba, uye kusvika kumagumo nhanho nhanho. Ita zvinangwa uye zvipikise iwe pachako.
"Chikwata 150, Simba Denderedzwa"
Kupatsanurwa kwebasa, kukurudzirana, kuvimbana, kuona muganhu pakati pezvinobvira nezvisingagoneki
Sezvo husiku hunouya, mhepo ichiri kudziya
"Happy BBQ" yakazivisa kuvhura
Kaihua Hummingbirds ari kure nemhirizhonga yeguta
Nyatsokoshesa iwo unoshamisa mamiriro ekuungana kweboka mune zvakasikwa
Shandira pamwe nekuzvinetsa iwe pachako
Simbisa mweya wechikwata uye kunzwisisana nekuvimbana pakati penhengo dzechikwata
Pamwe chete, timu ndiro timu
Post nguva: Mar-20-2021
Adress: Kwete 301 Le Hua Road, Mould New Town, Xinqian, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, 318020, PRChina.
Kaihua Mould's 2021 "Dhijitari Manage ...
Musi waMarch 2-3, 2021, Kaihua Mould "Dhijitari ...
2020 Yechipiri Quarter Kushambadzira Musangano ...
Na8 am musi waChikunguru 5, 2020, Kaihua Mould's 2 ...
2021.3.4 Yuan Chengmao, Mutevedzeri Wachigaro we ...